सन्दीपले खोले राज 'आईपीएल किन उत्कृष्ट लिग' (अन्तर्वार्ता) | | Neplays.com
By Neplays	 Last updated May 13, 2019
काठमाडौं, २९ वैशाख ।नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आईपीएल क्रिकेट खेलेर स्वदेश फिर्ता भएका छन् । भारतमा उनी दिल्ली क्यापिटल्सबाट आईपीएल खेलेका थिए । ६ खेलमा बलिङ गरेका सन्दीपले महत्वपूर्ण ८ विकेट हात पारे । गत सिजनमा अन्तिमका तीन खेल खेलको सन्दीपले ५ विकेट लिँदै सनसनी मच्चाएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार अपारान्ह ओर्लिएका सन्दीपले खेलपत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आईपीएल क्रिकेट किन उत्कृष्ट भनेर सोधेको जिज्ञाषामा यसरी जवाफ दिए ।
समग्रमा राम्रै भयो । कम चान्स पाएँ । गत सिजनको तुलनामा यस पटक धेरै गेम खेले । दिल्लीको टिममा व्याट्सम्यानको खाँचो पर्नाले म बाहिर बस्नु पर्यो । आफ्नो प्रदर्शन, टिम जर्नी सबैसँग ह्याप्पी छु । गत सिजनमा लास्टमा हुनु र अहिले तेस्रो हुनु मेरा लागि ठूलो उपलव्धि हो ।
दिल्ली तेस्रो स्थानमा आउँदा तपाईले कति योगदान गर्नुभयो ?
टिम गेम भएकाले सबैको योगादन बराबर नै हुन्छ । कुनै म्याचमा मेरो प्रदर्शन अलि बढि भयो होला कुनैमा कम भयो होला तर समग्रमा सबैको मेहनतले नै दिल्ली तेस्रो भएको हो । आईपीएल मेरालागि ठूलो च्यालेन्जको विषय थियो । आईपीएल ठूलो प्रतियोगिता भएकाले यसमा खेल्न आफूलाई प्रमाणित गर्न पर्छ । खेलाडीको जीवनमा ‘अप एण्ड डाउन’ हुन्छ । समग्रमा मेरो प्रर्दशन राम्रै भयो ।
प्रेसर त्यस्तो हुँदैन् । कहिले खेल्ने भन्ने कुरा त टिमको डिसिजन हो । उहाँहरुलाई कस्तो पिचमा ब्याट्सम्यान र बलरको खाँचो पर्छ भनेर । लोकल कोटामा ‘लेग स्पिनर’ २ जना भएकाले मेरो चान्सेज कम भएको हो । त्यही पनि मैले ६ खेलमा बलिङ गर्न पाए । आफैमा म विदेशी खेलाडी, त्यसमा पनि लेग स्पिनर, स्थानीय खेलाडीहरु लेग स्पिनर हुँदा हुँदै पनि चान्स पाउनु भनेको मेरा लागि ठूलो कुरा थियो । गत वर्ष प्रतियोगितबाट बाहिरिसके पछि मैले चान्स पाएको थिए, त्यतिबेला पनि मैलो राम्रो प्रदर्शन गरेको थिए । अहिले बीच बीचमा चान्स पाएको थिए, कहिले राम्रो गरेर पनि बाहिर हुनु परेको थियो । टिम म्यानेजमेन्टले लिएको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्छ, त्यही म्यानेजमेन्टका कारण अहिले दिल्लीको समग्र प्रदर्शन पनि राम्रो भएको हो ।
सिक्ने कुराहरु कहिले पनि पूर्ण हुँदैन् । राम्रो राम्रो बलरले पनि रन खान्छ, राम्रो राम्रो व्याट्सम्यानहरु पनि सून्यमा आउट हुन्छन् । यो भनेको तल माथि हुनु भनेको पार्ट अफ लाइफ । ६ खेलमा ८ विकेट मेरा लागि राम्रो जर्नी हो ।
पहिलो लिग पछि र अहिलेको लिग पछि आफूलाई कति परिपक्व भएको पाउनुहुन्छ ?
गत सिजनको आईपीएल पछि मैले लगातार विश्वका अन्य लिगहरुमा खेले । अहिलेको लिगमा अनुभवबाट धेरै कुराहरु सिकेर आए । अहिलेको समय भनेको गेम लर्न भन्दा पनि एक्सपिरियन्स लर्न गर्ने बेला हो । यो अनुभवले सधैभरै खेलमा तल माथि भइरहन्छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । खेल विग्रदा न आत्तिने र राम्रो हुँदा नमात्तिने कुराहरु सिकाउँछ ।
हामीले रन अलि थोरै बनायौं र चेन्नाईविरुद्ध बलिङ अलि कमजोर भयो । ब्याटिङमा अलि राम्रो गरेको भए चान्स थियो । ऋषभ पन्तले एक इनबाट राम्रो खेल्दा खेल्दै अर्को इनबाट उसलाई साथ दिएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो । सुरुमा फाफ डु प्लेसिस र वाट्सनले शुरुमा राम्रो बलिङ गरेका थिए । त्यस दिन हाम्रा लागि थिएन् यत्ति भनौं ।
प्लेन ढिला भएर आकाशमा फन्को मार्दा डरले सातो गयो । ल्याण्ड गर्न लागेको प्लेन काठमाडौंको मौसम खराबीका कारण १८ चक्कर जति लगाउँदा मेरो सातो गयो । यो भन्दा अघि चेन्नाईको खेल सकेर दिल्ली फर्कदा पनि त्यस्तै भएको थियो तर त्यस दिनको भन्दा आजको झनै डरलाग्दो थियो ।